‘पर्यटन मन्त्रालय चलाउन सकिँदैन’: प्रेम बहादुर आले
नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एकिकृत समाजवादी बन्दा एमालेको केपी ओली समूहका केही नेता माधब नेपालको पक्षमा लागे । एमाले छोडेर नेकपा एस बनेका नेतामध्येका एक हुन् प्रेम बहादुर आले ।
कार्यक्रममा आलेले ‘यस्तो तालले यो (पर्यटन) मन्त्रालय चलाउन सकिँदैन, वाइडबडीको ऋ’ण मात्रै २७÷२८ अर्ब छ, ती वाइडबडी जहाज चाहिँ घाममा सुताएर राखिएको छ, जहाजलाई तातो घाममा सुकाएर पैसा आउँछ ? यसरी त पैसा आउँदैन होला नि, त्यसलाई उडाएपछि पो पैसा आउने हो त, युज नगरी सुकाएर हुन्छ ?’
उनले भने, ‘त्यतातिर खोइ ध्यान ? अब आन्तरिक उडान पनि थप गर्नेगरी काम सुरु हुन्छ ।’उनले सरकारले खर्च गरेर बनाएका डोमेस्टिक एयरपोर्टहरु चरन क्षेत्र हुनु दु’र्भाग्य भएको भन्दै अब यस्तो हुन नदिईने दाबी गरे । नेपाल समाचार बाट
२०७८ आश्विन ३१, आईतवार ००:१३ 1 Minute 197 Views